Xildhibaano eedeyn usoo jeediyey Madaxweyne Farmaajo – Geelle Magazine
Xildhibaano ka tirsan labadda Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya ay kula xisaabtami doonaan sababta Ciidamo aan qeyb ka aheyn AMISOM ay gacanta ugu hayeen Garoonka Bardaale.
Xildhibaanada ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya uu dalka soo geliyey Ciidamo ku xadgubyey Madax-banaanida dalka.
Senator Ilyaas Cali Xasan oo ka mid ah Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa sheegay in kulamada ugu horreeya ee labadda Aqal ay uga hadli doonaan dhibaatadii ka dhacday Bardaale.
“Madaxweyne Farmajo, hada waan fahaney waxa adiga iyo Abiy Ahmed idinka dhaxeeyo aad Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo Umada Soomaaliyeed ka qarineysey inaad u sharaxdo laakiin Ilaah ayaa banaanka keenay ceybtaada. Baarlamaanka iyo Shacabka Soomaaliyeedna waxay qaadi doonaan go’aano sharci oo ka dhan ah ku xad gudubka madax banaanida dhulka iyo dhiiga Bardaale ku dul-daadisey” ayuu yiri Senator Ilyaas.
Waxaa uu intaasi kusii daray, “Soo gelitaanka Ciidanka Itoobiya ee aan qeybta ka aheyn AMISOM waxay si cad uga soo horjeedaa sharafta iyo madaxa-banaanida dhulka Soomaaliyeed”.
Warqad kasoo baxday taliska Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in taliska AMISOM uusan wax lug ah ku laheyn diyaaradii gargaarka siday ee dhawaan ku dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay.
AMISOM waxa ay caddeysay in diyaaraddaasi la toogtay falkaasna ay ka dambeeyeen Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugan Bardaale.